Dipole Antenna ရောင်းရန် | FM Transmitting Antenna | FM အသံလွှင့် အင်တင်နာ
1 bay FM-DV1 အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်2bays၊4bays၊6bays နှင့် 8 bays FM-DV1 အင်တင်နာများလည်း ရှိပါသည်။
FM-DV1 Dipole FM Antenna အကြောင်း
အဘယ်ကြောင့် FM-DV1 စွမ်းအားမြင့် FM Dipole အင်တင်နာကို ရွေးချယ်ပါသနည်း။
ဒေါင်လိုက် polarization ကို
FM-DV1 FM Dipole Antenna ဆိုတာဘာလဲ။
FMUSER FM-DV1 dipole FM antenna သည် FM ရေဒီယို အသံလွှင့်စနစ်များအတွက် အသုံးပြုသည့် dipole အင်တင်နာ အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး FM ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှု ပါဝါအချက်ပြမှုကို လက်ခံရရှိကာ အချက်ပြများကို ထိရောက်စွာ ပေးပို့နိုင်စေရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ များစွာသော အင်တင်နာ အများအပြား အင်တင်နာ ခင်းကျင်းမှုများသည် ထုတ်လွှင့်ခြင်း အင်တာနာ၏ အမြတ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
Antenna Power Splitter အတွက် ထပ်လောင်းဝယ်ယူသည့်လင့်ခ်များ-
အမှတ်တံဆိပ် အမည်များ frequency Range functions များ နောက်ထပ်
FMUSER FU-P2 87-108Mhz Antenna Power Spltter အလည်အပတ်
FMUSER FU-P4 87-108Mhz Antenna Power Spltter အလည်အပတ်
1. အင်တင်နာ အမျိုးအစားသုံးမျိုးကား အဘယ်နည်း။
Omnidirectional၊ directional နှင့် semi-directional တို့သည် အသုံးအများဆုံး အင်တင်နာအမျိုးအစားသုံးမျိုးဖြစ်သည်။ Dipole အင်တင်နာသည် ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုနယ်ပယ်တွင် အသုံးအများဆုံး အင်တင်နာဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် အချို့သော FM ရေဒီယိုလိုင်းများတွင် ဖြစ်သည်။
2. ရေဒီယိုအင်တာနာတစ်ခုအတွက် ဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ။
FMUSER သည် ပြီးပြည့်စုံသော အသံလွှင့်အင်တင်နာစနစ်များနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန ပက်ကေ့ခ်ျ၏ ကျွမ်းကျင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ သင်ရှာတွေ့နိုင်သော အခြားထုတ်လုပ်သူအားလုံးမှပေးသောစျေးနှုန်းထက် သင့်ဒေါ်လာရာနှင့်ချီသာကုန်ကျမည့် ဈေးကွက်ပေါက်စျေးထက်နိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြင့် FMUSER မှ ရေဒီယိုအစုံသုံးပစ္စည်းများနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းနည်းမျိုးစုံကို သင်လက်ကားရောင်းချနိုင်ပါသည်။ FCC လက်ခံထားသော LPFM အသံလွှင့်စက်တစ်ခုနှင့် အမှန်တကယ်စျေးသက်သာသော အင်တာနာတစ်ခုအတွက် အသံလွှင့်စက်၊ အင်တင်နာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် များသောအားဖြင့် အနည်းဆုံး $3500 ကုန်ကျသည်။
၃။ ရေဒီယို အသံလွှင့်ခြင်း အမျိုးအစားများကား အဘယ်နည်း။
FM ရေဒီယိုတွင် အဓိက ကြီးပြင်းလာခဲ့သည့် မကြာသေးမီ မျိုးဆက်များနှင့်အတူ၊ AM၊ FM၊ Pirate Radio၊ Terrestrial digital Radio၊ နှင့် Satellite ကဲ့သို့သော ရေဒီယို ထုတ်လွှင့်ခြင်း၏ ကျယ်ပြန့်မှုကို မသိနားမလည်သူများ အများအပြား ရှိပါသည်။
4. အထိရောက်ဆုံး အင်တင်နာက ဘာလဲ။
ကားရေဒီယိုအင်တင်နာများသည် AM ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းများတွင် -20 dB (ထိရောက်မှု 1%) ၏ အင်တင်နာထိရောက်မှု ရှိနိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အင်တင်နာများသည် လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းတွင် လှိုင်းအလျားတစ်ဝက်ထက် များစွာသေးငယ်သောကြောင့် အင်တင်နာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို များစွာနိမ့်ကျစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
5. ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရာတွင် မည်သည့်အင်တင်နာအမျိုးအစားကို အသုံးပြုသနည်း။
Dipole အင်တင်နာများသည် အသုံးအများဆုံးအင်တင်နာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အလျားလိုက်လေယာဉ်တွင် 360 ဒီဂရီအထိ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း (RF) စွမ်းအင်ကို ဖြန့်ကျက်ပေးသည့် omnidirectional ဖြစ်ကြသည်။ ဤစက်ပစ္စည်းများကို ကြိမ်နှုန်း၏တစ်ဝက် သို့မဟုတ် လေးပုံတစ်ပုံလှိုင်းအလျားတွင် ပဲ့တင်ထပ်နေစေရန် တည်ဆောက်ထားသည်။
6. FM dipole အင်တင်နာဆိုတာဘာလဲ။
Dipole အင်တင်နာတွင် အစွန်းနှစ်ချောင်း သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်။ လှိုင်းတစ်ဝက် dipole တစ်ခုအတွက်၊ Dipole ၏ခြေထောက်တစ်ခုစီသည် လျှပ်စစ်သုံးလပတ်လှိုင်းအလျားရှည်မည်ဖြစ်သည်။ Dipole ၏အရှည်ကိုလည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ FM အသံလွှင့်လှိုင်းသည် 87.5 MHz မှ 108 MHz အထိ တိုးချဲ့သည်။
1 Bay FM အင်တင်နာ
151cm * 123cm * 14cm 18KG၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ခငွေရှင်းတမ်း 52kgs
2 Bay FM အင်တင်နာ
151cm * 123cm * 23cm 38KG၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ခငွေရှင်းတမ်း 85kgs
4 Bay FM အင်တင်နာ
151cm * 123cm * 23cm 30KG၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ခငွေရှင်းတမ်း 85kgs
6 Bay FM အင်တင်နာ
8 Bay FM အင်တင်နာ
၁၇၀ စင်တီမီတာ * ၁၇ စင်တီမီတာ * ၁၆ စင်တီမီတာ၊ ၃၀ ကီလိုဂရမ်၊ လေယာဉ်တင်ပို့ခသည်အလေးချိန် ၃၀ ကီလိုဂရမ်
ပင်လယ်အော် မျက်နှာ အကျိုး အလေးချိန် အမြင့် လေတိုက်နှုန်း (v=160km/h) linear Array
dB အကြိမ်ပေါင်းများစွာ kg m kg ၁၁ ကီလိုဝပ် ၁၁ ကီလိုဝပ် ၁၁ ကီလိုဝပ်